विश्वकै अग्ली मोडेलले रोजिन् हजुरबा जस्तो प्रेमी (फोटोफिचर सहित)
विश्वकी सबैभन्दा अग्ली मोडेलको रुपमा किर्तिमान बनाएकी अमेरिकाकी अमेजन इभले जोडी भेटाएकी छिन् । क्यालिफोर्नियाकी बासिन्दा ३४ वर्षकी इभले जोडी त फेला पारिन्, तर आफुजत्तिकै अग्लो भने फेला पार्न सकिनन् । उनको मनको राजा...
३ किलोको च्याउ देख्नुभएको छ ? छैन भने हेर्नुस् (भिडियो सहित)
च्याउ कति सम्म ठूलो होला ? के तपाइँले तिन किलो सम्मको च्याउ हुन्छ भन्ने कुरा पत्याउनुहुन्छ ? कहाँबाट पत्ताउनु ? एउटा च्याउ १-२ सय ग्रामको हाराहारीकै हुन्छ । तर पोल्याण्डमा भने ३ किलोको च्याउ...
नेपालका बाँदरले गाउँघरतिर खेतबारीका बालीनाली चोरेर हैरान बनाउँछन् त सहरतिर पनि मान्छेलाई दुख दिन्छन् । तर अहिलेसम्म नेपालका बाँदरले युवतीका वक्षस्थल ताकेको घटना सुन्न पाइएको छैन । नेपालका बाँदरले युवतीका वक्षस्थलमा आँखा लगाउने आइडिया...
एक जना २२ वर्षे ठिटोको निधारमा नाक पलाएको छ । त्यो पनि उल्टो नाक । त्यो निधारको नाकलाई अब डाक्टरहरुले काट्नेछन् र खास नाक हुने ठाउँमा लगेर राखिदिनेछन् । जियाओलियान नामका ती युवकको निधारमा...
पाकिस्तानको भुइँचालोले समुद्रमा टापु निस्कियो
पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा मंगलबार गएको भुइँचालोमा परी ज्यान गुमाउनेका संख्या २ सय नाघिसकेको छ । धेरै मानिस घाइते भएका छन् र ठूलो भौतिक क्षति समेत भएको छ । भुकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षति त भयो नै...
संसारबाट लोप भए नीलो छाला भएका मान्छे
मान्छेको छाला कि त गोरो हुन्छ, कि त कालो वा गहुँगोरो पनि । तर संसारमा एक जना यस्ता व्यक्ति थिए जसको छाला निलो थियो । अमेरिकाका पाउल कारासन विश्वमा निलो छाला भएका एकमात्र मान्छे...
देख्दै डरलाग्दो, एक क्विन्टल भन्दा पनि बढि तौलको, झम्टेला की भन्ने जस्तो । सेतो खैरो रंगको सिंहलाई देख्दा जो कोहीको पनि आङै सिरिंग हुन्छ । तर ३१ वर्षकी एक युवती भने त्यो सिंहसँगै हेलमेल...
तन बुढो भएपनि मन बुढो हुँदैन भन्ने ठिकै रहेछ । ६६ वर्षको उमेरमा समेत मानिसलाई तन्नेरीको जोस देखाउने भुतले समात्दो रहेछ र उस्तै यौन आकांक्षा हुँदो रहेछ । उमेर घर्किएपछि तन्नेरीमा जस्तो जोस कहाँ...
हामीकहाँ धेरै मानिसको आउजाउ हुने सार्वजनिक स्थानहरु तथा सांस्कृतिक सम्पदाको आसपासमा जोडी कसेर बस्ने ठिटाठिटीहरुमाथि समेत प्रहरीको नजर पर्छ र उनीहरुलाई अश्लीलता फैलाएको भन्दै घोक्रेठ्याँक लगाएर पुलिस चौकीमा पूराइन्छ वा लखेटिन्छ । तर हाम्रोमा...
हामीकहाँ हुँदाखाँदाको श्रीमतीले मन्जुरी नदिइकन दोश्री भित्राउने हो भने कानूनले च्वाप्पै समात्छ, जेलको हावा खानुपर्छ । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो देश छ जहाँका राजाले हाम्रा इतिहासका राजा महाराजाहरुले जस्तै १५ वटी श्रीमती भित्राएका...
बेहुला बेहुली बिहेको रौनकमा मस्त थिए । अन्य आगन्तुकलाई पनि बिहेको रमाइलोले छोपिरहेको थियो । तर यत्तिकैमा त्यहाँ एक जना रगतले लतपतिएको युवक आयो । आफ्नै गुप्तांग कैँचीले च्वाट्टै काटेर रन्थनिँदै आइपुगेको त्यो युवकलाई...
नाइटोले बताउँछ महिलाको व्यक्तित्व
नवजात शिशुको नाभी काटिएको स्थानको चिन्ह नै नाइटो हो । बच्चा नजन्मियुन्जेल यहीँ अंगबाट बच्चाको सरीरमा पोषक तत्व पुग्छ, तर जन्मिएसँगै यो अंगको काम समाप्त हुन्छ । पेटको मध्यभागमा सबै मान्छेको नाइटो हुन्छ ।...